Shaqsigii weerarka mindida ka geystay bartamaha London oo noqday wiil Soomaali oo haysta dhalashada.. – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shaqsigii weerarka mindida ka geystay bartamaha London oo noqday wiil Soomaali oo haysta dhalashada..
Wiil 19 sano jir ah oo habeenkii xalay weerar mindi loo adeegsaday ku qaaday xarunta Russel ee ku taalo bartamaha magaalada London ayaa noqday Soomaali heysta dhalashada dalka Norway.
Wiilkan ayaa sida la sheegay dilay haweeney Mareykan ah oo da’deeda lagu sheegay 60 sano jir, wuxuuna sidoo kale dhaawacay 5 qof oo kale, waxaana booliska ay sheegeen inaysan jirin wax calaamado ah oo muujinaya inuu wiilkaasi ku xiran yahay kooxo argagixiso ah.
Wiilkan weerarka geystay ayaa la sheegay inuusan caafimaadkiisu taam ahayn, islamarkaana maskaxiyan uu yahay qof jiran, sida uu sheegay ku xigeenka taliyaha booliska Mark Rowley.
“Macluumaad badan ayaan haatan ka helnay dadka dhibanayaasha ah, haweeneyda la dilay waxay dhalasho ahaan ahayd Mareykan, 5 kale ee dhaawacantayne waxay ahaayeen dad isugu jira Australiya, Mareekan, Israiil iyo British, waxaana rumeysanahay in weerarkaasi uusan wax xiriir ah la lahayn fal argagaxiso, ilaa iyo hadda ma heyno wax caddeyn ah oo muujinaya inuu islaam xag-jir ah yahay wiilkaas” Ayuu yiri taliye ku xigeenka booliska.
Inkastoo muuqaalka iyo magaca wiilkan aanan weli la shaacin, ayaa hadane waxaa la sheegayaa inuu asal ahaan kasoo jeedo dalka Soomaaliya balse haysta dhalasha dalka Norway.
Dhinaca kale, duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa shacabka ugu baaqay inay muujiyaan deganaansho islamarkaana ay feejignaadaan, inkastoo la sheegay in falkaan aanay wax xiriir ah la lahayn fal argagaxiso ah.